Izinwele ezinde azizange zifakwe kwifestile, kodwa kungekhona wonke umntu onokuzikhula. Ngokuqinisekileyo, unako ukuhlala usebenzisa iinkonzo zeengcali ekwakheni, kodwa kuyinto enomdla kakhulu ukuba ne-chic yakho. I-intanethi igcwele zonke iintlobo zeengcebiso ezicinga ukuba zinceda ukufumana ubude obude. Ziziphi iziphakamiso eziyiluncedo, kwaye ziphi na izinto ezingengomxholo?
Indlela yokukhawulezisa ukukhula kweenwele: iingcebiso ezithandwa kakhulu
Izinwele zakhula ngokukhawuleza, kufuneka uhlale unqumla-inkolelo. Ukunyuka kweenwele rhoqo, okanye ukugcoba "phantsi kwe-zero" akuyi kuyenza imida ikhule ngokukhawuleza. Iingcebiso ezilungiselelwe kakuhle zikhangeleka zikhangeleka ngokuthe tye kunokuba zomelele kwaye zibuthakathaka, kwaye zidale ukukholelwa ukuba iindwangu zikhudlwana kwaye zikhudlwana.
Ukuxilwa kweNtloko kukhuthaza ukukhula kweenwele - okwenyaniso. Kwinkqubo yokucebisa, iinwele ezinqabileyo ziqala ukusebenza. Impembelelo yomatshini kwi-scalp iphucula ukujikeleza kwegazi, ukwenzela ukuba iifollic ziza kufumana ngokukhawuleza izondlo kunye ne-oxygen. Kwanele ukunika inkqubo 5-10 imizuzu ngosuku. Abanikazi beenwele ezinqamlekileyo iingcambu zolu hlobo aluyi kusebenza, njengoko ukuveliswa kwamafutha kuya kwanda emva kweseshoni.
Izithambo zezinwele ziyakuthintela iinwele ukuba zingakhuli-inyaniso. Ngabo ngokwabo, imisila eyomeleleyo kunye neenkizi aziyingozi njengoko zixelelwa ngazo. Ukulahleka kwansuku zonke kweenwele ezingama-50-100 kuthathwa njengesiqhelo. Ukuba uthe wagxotha iinwele zakho waza waphawula ukulahleka kwayo, musa ukukwesaba. Inkqubo yendalo yothintela kuphela iqela elimhlophe. Enye into - afrokosy. Ukuluka okunjalo kuyonakalisa kakubi imida. Emva kweenwele ezinjalo, iingqungquthela zikhula ngokukhawuleza, kuba zakuba nomthwalo omkhulu ixesha elide, kwaye izinwele zezinwele zazingekho i-oxygen.
Isondlo esifanelekileyo sikhuthaza ukukhula kweenwele ngokukhawuleza - okwenyaniso. Eyona nto "eyakhiweyo" yeenwele i-keratin - iprotheni eyinkimbinkimbi. Abo baphupha iinwele ezinothileyo, kucetyiswa ukuba basebenzise iiprotheyini ezininzi (intlanzi, inyama, izityalo, i-egg white, ushizi). Ekudleni kufuneka kubekho iimveliso ezinesinyithi, ezibangela ukuzaliswa kweeseli kunye ne-oksijeni kwaye kunceda ukuba ngcono iifithamini zeqela B - "iivithamini zobuhle".
Ukuba udibanisa imida ezili-100 ngemini, unako ukukhawuleza ukukhula kwawo-inkolelo. Kufuneka udibanise yonke imihla, kodwa ukwanele ukukwenza amaxesha angama-15-20, ukuze ungalonakalisi isakhiwo seenwele. Eyona nto inobungozi kakhulu imivimbo iya kuzisa izitshixo ezipholileyo. Ukunciphisa ubuqhetseba babo, kucetyiswa ukuba usebenzise ibrashi ngeempahla eziqhelekileyo.
Ukugcina ukunciphisa ukukhula kweenwele - inkolelo. Ukugcina ngeendlela zobugcisa akuchaphazeli ukukhula kwemida nangayiphi na indlela. Ukuba unenjongo yokukhawuleza, ungalibali le nkqubo yokunyusa izinwele.
I-pepper ebomvu ne-mustard zibhekwa njengezona zinto zisebenzayo zokukhula kweenwele ekhaya - okwenyaniso. I-Pepper kunye ne-mustard masks kunye ne-wraps inefuthe elifudumalayo lokufudumala. Njengomphumo wokukhawulezisa i-microcirculation yegazi kunye nokuvula ii-pores, iifolisi zeenwele zifumana izondlo ngokukhawuleza. Ngelo xesha, iifollic sleeping zivuselelwe. Kodwa loo majelo enkathazo ayanconywa ukuba asebenzise abanikazi bomnxeba owomileyo kunye ne-scalp yobuhlungu.
Ii-shampoos ezikhethekileyo zinokukhawulezisa ukukhula kweenwele - inyaniso ekhethekileyo. Into yokuqala yokukhumbula kukuba awukwazi ukukholelwa ukukhangisa. Akukho shampoo inokujamelana nomsebenzi wokukhawulezisa ukukhula kwemida emi-3-5. Isiphumo esiphezulu esinokuthi sinokubalwa kuso sisinyuke nyangazonke se-1.5-2 cm (ngesantya se-1-1.5 cm). Umgaqo wesibini: iimali ezisebenzisayo zithengiswa kuphela kwii-pharmacy okanye kwiivenkile ezizodwa. Ukuthenga "imimangaliso" ye-shampoo kwimarike eyininzi iya kukudanisa ngokukhawuleza. Ekuqaleni, kuya kubonakala kuwe ukuba iinwele nenyaniso yaba yimbi kakhulu. Kodwa oku kuyingcamango, kuba kwimveliso enjalo kaninzi ifaka i-silicones, apho izinwele zibonakala zikhudlwana. Njengengxenye ye-shampoo "yokusebenza", awuyi kufumana i-sulfate, kodwa uya kufumana i-keratin, i-vitamin-mineral complex, i-acid acids kunye namafutha enyama.
Ungayitshintsha njani imbonakalo ukuba ungeyinto enhle
IiMedical Herbs kwiCosmetology
Isaladi yaseShayina kunye nengqolowa
Yimiphi imifanekiso onokuyilungisa kwigumbi lokulala
I-Saladi kunye nee-mushroom ezigayiweyo kunye neetatayi zentshuzi
Iibhisikidi ze-tshokolekile nge-ukhilimu omuncu
I-Junior Eurovision Song Contest Ingqungquthela: yonke into ejabulisayo
Isaladi ehlwaya kakhulu kunye neenkuni ze-crab emizuzu emi-5, zokupheka kunye nesithombe
Buckwheat ngeesisu kwi-multivark